Ardayda Caalamiga ah ee s waxay ku guuleystaan ​​shahaadada Hodges U
Ardayda Caalamiga ah waxay Ka Ogaadeen Gees Tartan Ah Jaamacadda Hodges!
Miyaad hadda deggenahay heer caalami oo aad ka fikireysaa inaad ku kasbato waxbarashadaada Mareykanka? Waxaad ka heshay gurigaaga Jaamacadda Hodges!
Waxaan diirada saareynaa sidii loo horumarin lahaa wadiiqooyinka habeysan ee ardayda shaqeeya waxaanan sifeynay nidaamkayaga aqbalitaanka si aan ugu fududeyno codsadeyaasheena caalamiga ah inay ka helaan guushooda Hodges U. Plus, waa hadafkeena inaan dhisno bulsho kala duwan oo aan soo dhaweyno ardayda dhammaan asal ahaan iyada oo aan loo eegin jinsiyadda, midabka, caqiidada, diinta, jinsiga, nooca galmada, asalka qaran, ama karti / naafonimo.
Geesi noqo Ka bilow Jaamacada Hodges Maanta.
Manhajka Shaqaalaysiinta Shaqaalaha
Loogu magac daray “40 Kulliyadood ee ugu Fiican Florida"
Jaamacadda aan macaash doonka ahayn
Loogu magac daray Xerada 3aad ee ugu Amaansan Magaalada Florida
Southwest Florida waa a janada kulaylaha oasis oo loogu talagalay dadka ka socda dhammaan qaybaha bulshada
Qaado fasalada dhow geedo timir ah, qorraxda, Iyo xeebaha ciidda cad
Hal Fasal Bishiiba Hyper Format Diirada Leh oo la kulmay Isqorista Waqti Buuxda shuruudaha
Barnaamijka Booqdaha Ardayda iyo Isweydaarsiga (SEVP) shahaado dugsiga
We fududee si aad u hesho dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah inaad sameysid Waxbarashada Mareykanka suurto gal
30 Sanno oo ka mid ah U adeegida Tacliinta Sare ardayda
Macluumaadka Ardayda Caalamiga ah
Khidmadda Codsiga ee Jaamacadeed: $ 20
Fadlan la shaqee wakiilkaaga oggolaanshaha si aad u dejiso habka ugu fudud ee lagu bixiyo khidmadda dalabkaaga.
Waqtiga Diiwaangelinta Codsiga
Jaamacadda Hodges waxay ku shaqeysaa nidaam qaadasho bille ah oo loogu talagalay ardayda mustaqbalka ee la jaan qaada taariikhaha bilowga koorsadeena billaha ah. Waxaad ubaahantahay inaad qiimeyso goorta aad jeceshahay inaad ka bilowdo waxbarashadaada Hodges isla markaana qorsheyso inaad bilowdo geedi socodka dalabka waxbarashada caalamiga ah ugu yaraan 90 maalmood (3 bilood) ka hor. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan dhammaystirno ka baaraandegidda dalabkaaga, diiwaanno dheeri ah, iyo Fiisooyin.
Macluumaad Dheeraad ah ee Ardayda Caalamiga ah
Macluumaadka ku saabsan dhibcaha, deeqaha waxbarasho iyo kaalmada maaliyadeed, caymiska caafimaadka, iyo gaadiidka, fadlan tixraac annaga Buugga Ardayga.
Ogolaanshaha Ardayda Caalamiga ah
Ogolaanshaha Caalamiga ah ee Hodges U
Imaanshaha Hodges U waa fududahay! Waxaan dardar galineynaa nidaamka aqbalida ardaydeena caalamiga ah, taas oo ka dhigeysa mid si fudud uga badan sidii hore in lagu xaadiro kuleejka Mareykanka. Waxaan sidoo kale bixinnaa barnaamijyo shahaadada internetka ah xitaa haddii aad rabto inaad sii joogto gurigaaga, weli waad kaqeyb geli kartaa Hodges U oo aad ugu sii dheeraataa shaqada noloshaada.
Jaamacadda Hodges waa loo oggol yahay sharciga federaalka in lagu qoro ardayda aan soogalootiga ahayn. Waana ku faraxsanahay inaad tixgelinayso Hodges shahaadadaada! Ardayda caalamiga ah ee suurtagalka ah waxaa loo kala saaraa sidan oo kale haddii aysan ahayn muwaadiniin Mareykan ah, laba dhalasho leh, ama degane rasmi ah, oo ay codsanayaan Fiisaha ardayda F-1 ama fiisada J-1 Exchange Visitor Visa (fiisooyinka booqdayaasha isweydaarsiga waxaa loo isticmaali karaa ardayda ama aqoonyahannada). Fadlan ka hubi gelitaanka ku saabsan u qalmitaanka barnaamijkaaga shahaadada aad u-qalanto ee daraasadda caalamiga ah maadaama barnaamijyada oo dhan aysan oggolaan Waaxda Amniga Gudaha ee Mareykanka, Barnaamijka Booqdaha Ardayda ee Isweydaarsiga, ama Waaxda Arimaha Dibadda ee Mareykanka si ay uqorto ardayda caalamiga ah.
Waxaa jira dhowr talaabo oo lagaa rabo inaad fuliso si aad xaq ugu yeelatid inaad dhigatid Jaamacadda Hodges waxaanan diyaar u nahay oo aan diyaar u nahay inaan kaa caawino bilowgaaga.
Talaabooyinka Ogolaanshaha Caalamiga ah
Buuxi a codsiga gelitaanka iyo soo gudbinta khidmadda dalabka aan la soo celin karin.
Waraaqaha qoraalka, oo si rasmi ah loogu qiimeeyay hay'ad qiimeyn la ansixiyay, dhammaan shaqooyinka koorsada ee aan lagu marin hay'ad Mareykan ah oo la aqoonsan yahay. Booqasho naces.org liiska hay'adaha la ansixiyay.
Caddaynta taageerada maaliyadeed oo muujinaysa caddaynta maalgelinta, oo ku filan in lagu daboolo wadarta kharashka sannadlaha ah ee xaadiritaanka iyo kharashyada guud ee nolosha. Lacagta ku jirta bayaan xisaabeedka (xisaabaadka) bangigu waa inay u dhigantaa laba semestar oo waxbarashada iyo khidmadaha ah. Waxaad isticmaali kartaa ugu badnaan shan (5) xisaab bangi. Fadlan la hadal la-taliyaha gelitaanka si aad ugala hadasho duruufahaaga shaqsiyeed iyo sida ay u saameyn ku yeelan karaan shuruudahan.
Caddeynta aqoonta Ingiriisiga
Dhammaan codsadeyaasha caalamiga ah ee afkooda hooyo uusan aheyn Ingiriis waa inay soo gudbiyaan caddeynta aqoonta Ingiriisiga mid ka mid ah siyaabaha soo socda:
TOEFL dhibcaha iBT ugu yaraan 79, kumbuyuutar ku saleysan 213, ama la qoray 550; OR
IELTS ku dhali natiijo guud oo kooxeed ah 6.0 ama ka badan; OR
SAT dhibcaha Akhriska iyo Qorista Cadeymaha ku saleysan ee 550; OR
Si guul leh ku dhammaystir barnaamijka IEP0002 Intensive English.
Shuruudaha ayaa sidoo kale lagu qancin karaa iyadoo la soo gudbiyo mid ka mid ah kuwan soo socda:
650-eray oo darajooyin qoraal ah (loogu talagalay ardayda dhammeeyay ugu yaraan saddex sano oo isku xigta xarun ay Ingiriisigu tahay luqadda wax lagu dhigto); OR
Dhibcaha 4 ama 5 ee Imtixaanka Guddiga Meelaynta Horukacsan (AP) ee Luqadda Ingiriisiga; OR
A 5 ama ka sareeya oo ku saabsan IB (International Baccalaureate) imtixaanka Luqadda Heerka Sare A ee Ingiriisiga; OR
Dhibco IB la saadaaliyay oo ah 32 ama ka fiican; OR
Dhameystirka Dugsiga Sare ee xarun ku hadasha Ingiriisiga.
Ardayda ka socota waddamada aan ku hadlin Ingiriisiga ee aan haysan caddayn aqoonta Ingiriisiga, ama dhibcaha ka hooseeya shuruudaha ugu yar, ayaa si shuruud leh loo aqbali doonaa waana inay qanciyaan shuruudaha aqoonta Ingiriisiga ka hor intaanay bilaabin barnaamijka shahaadadooda.
Dadka ku hadla Afka Ingiriiska Muwaadiniinta Boqortooyada Ingiriiska, Jamhuuriyadda Ireland, Australia, Kanada, New Zealand, ama waddamada kale ee Ingiriisigu yahay luqadda rasmiga ah IYO kuwa aan fulinin shuruudaha kor ku xusan, waa inay la xiriiraan Xafiiska Ogolaanshaha si loo go'aamiyo sida loola kulmo oggolaanshaha. shuruudaha.
Marka la aqbalo, ardayda caalamiga ahi waa inay bixiyaan kharashka kal-fadhiga koowaad ee joogitaanka. Intaa ka dib, ardaydu waxay awoodi doonaan inay dalbadaan Form I-20 looga baahan yahay inay ka helaan VISA ardayga saraakiisha dalkiisa hooyo.
Majani Lullein (Madaxweyne Ku Xigeen) - ESL, Paralegal
Shaqada ay bulshada u hayso iyada oo ah Madaxweyne ku xigeenka Anchorage Productions Media, iyo waliba sida ay ugu heellan tahay barashada iyo ku guuleysiga Hodges, waxay meteleysaa jaamacadda ku dhex taal bulshada Isbaanishka. Muddo 10 sano ah, Lullein waxay sii waday af hayeenka, iyadoo sheekadeeda guusha la wadaagaysa TV-yada, joornaalada, joornaalada, iyo raadiyaha, iyadoo leh, "Waxaan la kulmay dad ila wadaagaya khibradooda Hodges. Qaar badan oo ka mid ahi waa soo galooti, ​​dad leh rajo weyn iyo riyooyin, waxayna ii sheegeen in sheekadayda ku saabsan ka gudubka afafka iyo caqabadaha dhaqanka ay ku dhiirrigelisay inay wax badan bartaan, shaqeeyaan, oo ay waxbarashadooda helaan. ”